यो विकृतिलाई अब के गर्ने ? | मझेरी डट कम
उपस्थित सबै मृतकको नाममा समवेदनाका लागि पो उपस्थित भएका रहेछन् । म आफू बडो लुम्सो लुम्रो जस्तो भए पनि बाँकी समवेदनाको कार्यक्रममा उपस्थिजतहरू निकै तामझामका साथ आएका रहेछन् । मगमग अत्तरको बासना आइरहेको थियो भीडबाट । पुरुषहरू परस्परमा केकेके कानेखुसीको शब्दहरुमा गफगाफमा देखिन्थे सायद पार्टीको चुनाबको, देशमा भएको भ्रष्टाचारीको, जम्बो मन्त्री मण्डलको, देशको राजनीति आदिको आकलन हुनु पर्ने हो उनीहरुको गफगाफमा । कोही गलललल हाँस्तै गरेका पनि देखिन्थे, कोही भने शौचालय कता छ भनेर शौच कर्मका लागि सोधपुछ गरिरहेका थिए । उता समवेदनाका लागि उपस्थित हुनु भएका महिला मण्डलीले फेसनको महत्व रामरी बुझेको देखिन्थ्यो । वस्त्रको सानोतिनो प्रदर्शनी नै भनेजस्तो देखिन्थ्यो । त्यति धेरै ता हैन दुई जना नानीहरू भने यो तिघ्रासम्म अघाडितिर धुजैधुजा पारेर च्यातिएका आजभोलिको फेसनमा चलेका प्यान्ट लाएका पनि देखिनु भो । यो प्यान्ट पछाडितिर पनि त्यसरी नै च्यातिएको थियो कि अगाडि मात्र हो हेर्न चाहेर पनि मैले सकिन । अलिक मिलेन पनि । पुरानको सन्दर्भ ता बल्ल पो थाहा भो गरुड पूराण पो रहेछ ।
केही छिन पछि पण्डितजीले गरुड पूराण सकेर यता समवेदनाको पूराण वाचन गर्ने अवसर दिनु भाको हुँदा तयार परियो । हाम्रो टिमका लिडरले सबैको ध्यानाकर्षण गर्नु भए तापनि मोबाइहरू भने ध्यानाकर्षणमा परेनछन् । यो कुनातिर कसैको गोजीवाट मोबाइल बज्छ, ऊ कुनाबाट बज्छ । तैपनि यस्तै बीचमा हाम्रो टिमलिडरले समवेदना पढ्न थाल्नु भो । मैले समवेदनाको भाका सुने र समवेदनाको मूल्यवान चाँदीको फ्रेम लगाएर ल्याइएको समवेदनाको डिजाइन पनि हेरें । ओहो, बडो कलात्मक, सजिसजाऊ गरिएका, कसैकोभन्दा कम नलाग्ने, भित्रको पेट बोली पनि उस्तै आकर्षक, बडो गम्भीर शब्दहरुले भरिएको माथितिर मृतकको सुन्दर र सानदार चित्रले सजाइएको । टलललल टल्केको र अति नै आकर्षक रहेछ ।
उहाँले आफ्नो कर्मकाण्डीय परम्परालाई बडो सजिलै सक्नु भो । समवेदनाको प्रवचनमा राम्रो वक्ता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने भान भो । पत्र म पुष्प म धुप म दीप म पनि सक्नु भो र ल्याइएको भव्य समवेदनाको रजतपत्र लगेर सबैकोभन्दा माथितिर झुन्डाउनु भो र यो कार्य सक्नुभो । कुनै मन्त्रीले भव्य समारोहमा ठुलो व्यानर उघारेर कार्यक्रममो शुभारम्भ गरेको बेला जसरी फोटो पत्रकारहरू फोटो खिच्न तँछाड मछाड गर्छन् यहाँ पनि यो प्रमाणपत्र माथि भित्तामा टाँस्ता त्यही झलक भो । सो कार्यक्रम सकेर अलि ओर आएर यसो हेर्नु भो त्यसलाई । सायद अरुकोभन्दा गतिलो भो भएन भनेर चेक गर्नु भा होला भन्ने मलाई लाग्यो । अनि मौनधारणका लागि सिङ्गो सभालाई ह्वीप जारी गर्नु भो । मौनधारण शुरु भो । तर मोबाइल भने मौन रहने हैनन् । यसै बीच पनि निकै ओटा मोबाइलले मौनधारण गरेनन् । खासखुसको भाषामा मौनअवधिपछि सुनियो यो सत्रौं पटकको मौन धारण रहेछ आजको । शुरुदेखिकै र अन्तसम्मको हो भने तिनसय पैंसठ्ठीभन्दा माथि मौनधारणको कार्यक्रम जाने रहेछ भन्ने बोध भो मलाई । विचरा क्रियापुत्रीहरुको बिजोग देखियो । एक डफ्फा आउँछ उठाउँछ, अर्को आएर त्यसै गर्छ । तिनलाई मानमनितो, खान्तेपिन्ते । आसन ग्रहण आदिले हैरानी भएको देखें मैले । हाम्रो डफ्फाले पनि त्यही गरेको छ । मलाई भने बिचराहरुलाई यसरी बारबार उठाउनु भनेको सजाय दिए जस्तो भान भइरह्यो । भर्खर विकास भएको परम्परा यस्तै छ । खैर जेसुकै होस् । म मात्र यसबाट अपवाद कसरी हुन सकुँला र ? मर्ने ता मरिगो जीवितलाई यो सास्ती दिनु भनेको दण्डका माथि अँझ दण्ड दिनु जस्तो लाग्यो मलाई । तैपनि म चुपचाप रहें ।
यसै बीच क्रियापुत्रि उठेर प्रत्युत्तरका रुपमा भाषण दिन थाल्नु भो । उहाँलाई यसो गर्नु बाध्यता रहेछ । धन्यवादज्ञापन गर्नु भो र अन्तमा पिताजीको शुद्धीशान्तिमा प्रसाद ग्रहणका लागि सबैलाई निम्ता दिनु भो । अन्तमा उहाँले हाम्रो त्यो सभामा बडो मार्मिक कुरा राख्नु भो— “हजुरहरुले टक्र्याउनु भएका यी ब्यानरहरू हामीले के गर्नु हो ? घरैभरि टाँगेर सधैं राख्ने कि यिनलाई के गर्ने चलन छ हामीलाई सुझाव दिनु भए हुने थियो ।” क्रियापुत्रीले नम्रताका साथ सोधेका कुरामा कसैले पनि सटिक उत्तर दिएको देखिएन । अनि पो बाहिर भित्तामा टाँग्न नअटाएका समवेदनाका प्रमाणपत्रहरू घरभित्र बोरामा खाँदेर राखिएको कुरा पनि उहाँले सुनाउनु भो ।
यसै बीच सभाका एक जनाले अलिक अप्रिय लाग्ने बचन बोलेको सबैले सुने । उहाँ एक्लै भन्दै हुनुहुन्थ्यो— “अब यो तडकभडकलाई समाजबाट कम गर्ने हो भने मृतकले नै मर्नु पूर्व यो समवेदनाका नाममा गरिने ऐयासी, विलासी र तडकभडकका देखावटीहरू मेरा नाममा नगर्नु भनेर सबैलाई सचेत अवस्थामै पहिले नै भन्नु पर्छ नत्र भने झन् झन् यसमा विकृति आउँछ, तिजमा, दसैंमा र अरु अरु चाडहरुमा आएको विकृतिजस्तो ।” उहाँको यस तथ्यपरक वचनमा भने कसैले पनि वास्ता गरेको बुझिएन किनभने समवेदनाका लागि हारालुछ थियो ।